घरमा श्रीमतीले प्रेमीलाई बोलाएपछि अचानक आएका श्रीमानले जे देखे…. - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
घरमा श्रीमतीले प्रेमीलाई बोलाएपछि अचानक आएका श्रीमानले जे देखे….
भारतको यूपीमा रहेको कानपुर देहातमा दुई जना दाजुभाई मिलेर एकजनालाई ईट्टाले हा नेर मा रि दिएका छन् । उक्त घटनाले त्यो क्षेत्रमा अहिले त नाव म च्चिएको छ । प्रहरीले ४ जनालाई गि र फ्ता र गरेको छ । श/वलाई पोष्टमार्टमकोलागी पठाईएको छ ।
प्रहरीको भनाई अनुसार ज्या न लि नुको वास्तविकता अ नैतिक स म्बन्ध हो । श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेमीसंग आ पत्ति जनक स्तिथिमा देखेपछि उक्त घ/टना भएको प्रहरीले जनाएको छ । श्रीमतीलाई प्रेमीसंग देखेपछि श्रीमानले भाईको साहायतामा आफ्नी श्रीमतीलाई मा रेको प्रहरीले बताएको छ ।
यो घ/टना भारतको रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्रमा रहेको खास गाउँको हो । जहाँ रामबाबू नाम गरेका एकजना व्यक्तिको श्रीमतीले रामबाबू जीवित हुँदा नै अरुसंग अ नै तिक स म्बन्ध बनाएकी थिईन् ।
श्रीमतीले सबैको आखाँ छ लेर सम्बन्ध बदन सिंह नाम गरेका व्यक्तिसंग लामो समयदेखि अ नै तिक स म्बन्ध बनाएका थिए । एकदिन घरमा कोही पनि नभएको मौकामा उनले आफ्नो प्रेमीलई बोलाएको र अ नै तिक काम गरिरहेकै बेलामा श्रीमानले आई पुगेको हुनाले उनीहरुबीचको सम्बन्ध